Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. यी गल्ती गर्दा तपाईलाई चाँडै लाग्छ बुँढ्यौली – Janata Live
काठमाडौं – पछिल्लो समय मानिसको दैनिकी फेरिएको छ । जसका कारण मानिसहरु व्यस्त बन्ने खानपानमा ध्यान नदिँने जस्ता समस्याका कारण मानिसहरु बिरामी परिरहेका छन् ।
व्यस्त जीवनमा मानिसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने फुर्सद छैन । त्यसैले उनीहरू जंक फूडमा झुम्मिन्छन् । यस्ता फास्टफूड शरीरका लागि पटक्कै लाभदायक हुँदैनन् ।
यस्ता कुराको सेवनले छिट्टो बूढो भइन्छ । बूढो भएपछि दाँत र शरीर कमजोर हुन्छ, गाला भित्र घुस्छ अनि चाउरी पर्छ ।
आजकल युवाहरूमा पनि यी सब लक्षण देखिन्छन् । यहाँ हामी केही यस्ता कारण बताउँदैछौं जसकारण समयअगावै बुढ्यौली आइलाग्छ । त्यसबाट बच्नुभयो भने जवान भइरहिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण अहिले देशमा लकडाउन छ । लकडाउन नभएको बेलामा पनि बिहानको चिसोमा भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम ज्यादा हुने भएकोले...
तपाईं आफ्नो शरीर ढाक्न कस्तो खालको कपडा प्रयोग गर्नुहुन्छ? हेर्दा सुन्दर, आकर्षक र आफूलाई सुहाउँदो। एलर्जी नहुने र गुणस्तरीय कपडा...
१. थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरहनुहोला। ९८ – ९९ फरेनहाइटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो। १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला। शरीर दुखेमा...
निषेधाज्ञामा मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार गर्ने ९ उपाय
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञामा मानसिक समस्या बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्यको स्याहार...
सुत्केरी महिलाका लागि पोषिलो सुत्केरी सुप कसरी बनाउने ?
सुत्केरी अवस्था महिलाको लागि विशेष संवेदनशिल र जोखिम अवस्था हो। यस अवस्थामा महिलाको लागि साधारण अवस्थामा भन्दा २५ प्रतिशत बढी...
अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, स्वास्थ्य भन्दा स्वादलाई प्रथामिकता व्यायाममा वेवास्ता लगाएतका कारणले अहिले थुप्रै मानिसको समस्या बनेको छ पेट लाग्नु...
काठमाडौं – धेरै नेपाली ग्यास्ट्रिकबाट पीडित हुने गरेका छन् । खानपानको सही व्यवस्थापन नहुँदा यस्ता समस्या देखा पर्ने गरेको चिकित्सक...
राम्रो बन्ने चाहना सबैको हुन्छ । त्यसका लागि धेरैले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । विशेष गरि राम्रो बन्नका लागि युवतीहरुले प्रयत्न...